Idzo nhanhatu Migwagwa yekuenda kuGlobal neE-Commerce Yako | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 30, 2017 Douglas Karr
Iko kuchinja kune omnichannel kutengesa kuri pachena, kwazvino kuchitsigirwa ne Kufamba kwaNike kutengesa pane ese maAmazon ne Instagram. Nekudaro, iyo switch yekuyambuka-chiteshi commerce haisi nyore. Vatengesi nevatengesi vanonetseka kuchengetedza ruzivo rwechigadzirwa rwakaringana uye rwakaringana kune ese mapuratifomu - zvakanyanya zvekuti 78% yevatengesi havagone kuenderana nezvinowedzerwa zvevatengi zvekuda kujekesa.
45% yevatengesi nevatengesi varasikirwa ne $ 1 + mil mumari nekuda kwezvinetso zvakatarisana nekubatanidza kugona-kwero kugona mune yavo nzira yekutengesa.
1WorldSync, anotungamira mupi wezvigadzirwa zvemukati mhinduro, achangobva kuburitsa infographic pazasi zvichienderana ne Charting iyo Kosi yeGlobal Commerce kudzidza.
Zvakajairika Migwagwa yekuenda kuGlobal pamwe neE-Commerce
Iyo infographic inoratidzira zvakajairika omnichannel zvipingamupinyi zvevatengesi nevatengesi, pamwe nemabatiro anoita vatungamiriri vemisika pamigwagwa iyoyo kuburikidza nekushandisa gore-based chigadzirwa ruzivo masisitimu.
Kubatana - zviripo zvigadzirwa ruzivo ruzivo hazvipe imwechete chikuva chekumisikidza uye kuchinjana yemhando yezvigadzirwa zvemukati nevatengesi vadyidzani.
Exchange - zviripo zvigadzirwa ruzivo ruzivo hazvienderane nematanho evavanotengesa navo.
kutevedzera - vatengesi vanonetseka kuti vafambirane nemitemo yakasiyana siyana munyika dzese.
Quality - vatengesi havagone kupa zvinomanikidza, zvine chekuita nezvechigadzirwa tsananguro uye mifananidzo yakawanikwa zvakananga kubva kune vatengesi vadyidzani.
omnichannel - vatengesi vanonetseka kuunganidza uye nekugovera zvakakwana, zvakaenzana, uye zvakavimbika ruzivo rwechigadzirwa munzira dzese.
Transparency - vatengesi havagone kuenderera pamwe nekusimudzira zvinodiwa nevatengi zvechigadzirwa pachena.
Tags: 1worldworldAmazonmatambudzikogore-based chigadzirwa ruzivo masisitimukutevedzerakutengeserana kwepasiresematambudziko ekutengeserana epasiresekutevedza kwepasiresekubatana kwepasi roseepasi rose e-commerceglobal ecommerce matambudzikopasi rosewepasi rose omnichannelpachena kwenyikaInstagraminstagram commercenikechigadzirwa ruzivo masisitimu
Yako Pamusoro Pedu Peji Inoteedzera Aya Akanaka Maitiro?
Aug 30, 2017 na12: 43 PM
Mukuda kwedu kuwedzera pane kudonhedza zvigadzirwa kubva kuChina, zvinoita kunge pane chinhu chimwe chinowirirana, uye zvinoita sekunge warova chipikiri mumusoro. Kutaurirana kwekare uye kuvimba. Imwe, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti iwe (uye mutengesi wako) urikutaura mutauro mumwe chete zvese chaizvo uye nenzira yekufananidzira.
Isu tave nerombo rakanaka, uye ndinotaura izvi nerurimi HUMONGOUS padama, kuUS neimwe nzira kuramba tiri pa metric system senzira yekuyera nekuyera zvinhu.
Uye zvakare, pane nyaya yemari. Mari inochinja nekukurumidza, izvo zvingadai zvakambove hombe arbitrage dhizaini inogona kukurumidza kushanduka kuita isinganyanye kukosha shure kwezvose. Mune yekudonha nyika, zvinofanirwa kuenda pasina kutaura kuti iwe unotarisira uye unamate kuti anotakura wako anzwisise chikumbiro chekuti varege kurega kuita kuti mutengi azive kuti iwe uchangobhadhara .75 yeavo makiti mittens, ivo vachingo akabhadhara iwe 9. Chinhu chakaoma chekutaurirana zvechokwadi.
Izvo zvese zvinouya mukutaurirana kwakanaka. Ndinovimba sekushandisa kwedu mafomu akafanana eSawaS, kugona kwekutaurirana kunozoita nyore.
Zvino mushure mekunyora zvese izvo, ndaifanira kungoti, "Ditto". 😉